Umatshini wokuzenzekelayo we-orbital umatshini abavelisi kunye nabanikezeli-i-china i-orbital welding machine factory
Njengemveliso ephuculweyo ye-YX-150PRO, yamkela iirobhothi eziqhubayo ezine-axis drive, zidityaniswe notshintsho lwengalo kunye nobuchwephesha bokujija umpu, zinokuwelda imibhobho ye-100mm yodonga (ngaphezulu kwe -125mm). Kukuqhambuka okukhulu kubuchwephesha bentsimbi ye-welding yodonga kwaye isetyenziswa ngokubanzi kwimizi-mveliso yeoyile kunye negesi.
Inkqubo ye-YX-150, yokuguqula i-MIG (FCAW / GMAW), kufanelekile ukuhambisa imibhobho yeentlobo zentsimbi. Yinto ubukhulu kumbhobho esebenzayo yi 5-50mm (ngasentla Φ114mm), efanelekileyo ukusebenza kwisiza. Ngoncedo lomsebenzi ozinzileyo, ixabiso eliphantsi kunye nokuphathwa okufanelekileyo, isetyenziswa kakhulu ekhaya nakwamanye amazwe.
Kwisiseko se-YX-150, i-YX-150 Pro idibanise intloko ye-welding kunye ne-welding feeder, iyenza ukuba ingagcini ngokugcina indawo, kodwa ikwenze ngcono ukuzinza kwe-welding (ngenxa yomgama osondeleyo phakathi kwe-feeder kunye nentloko ye-welding. ), Ukwenza umphumo we-welding ungcono.